JOOJI JOOJINTA - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » JOOJISO
Waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad go'aansatay inaad sigaar la'aan ka ahaato!
Hadday tani tahay isku daygii kuugu horreeyay ama waxaad joojisay marar badan kahor, joojinta tubaako la'aan waa tan ugu dambeysa, ugu muhiimsan, iyo inta badan qeybta ugu adag ee howshaada. Markasta xusuusi naftaada dhammaan sababaha aad u dooratay inaad sigaarka u joojiso. Ogow in siibbado dhici karaan, taasna macnaheedu maaha inaad wax walba ka bilowdo. Iyada oo aaladaha bilaashka ah iyo talobixinta halkan laga heli karo, ay u badan tahay inaad sigaar-ka-cabbista ka joojiso
Sida loo Maareeyo Jaceylka>